Bahrain, Omàna: Ny Fiainan’ireo Mpiasa Mpila Ravinahitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2017 6:39 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, বাংলা, English
Mohammad Iqbal dia Indoneziana mipetraka ao Bahrain. Tantarainy amintsika ny tantaran'ny mpiasa iray nifanena taminy :
Tsy ela akory izay dia tafahaona taminà Bangali [Bangladeshi] iray aho, izay miasa an-tselika aminà hotely iray ho toy ny mpanadio trano. Raha ny marina dia misahana ireo Toerana natao ho an'ny Daholobe izy, iray amin'ireo mpikarakara ny toerana rehetra natao ho an'ny daholobe ao amin'ilay hotely, manadio ny fitaratry ny varavarankely, na mpamafa ny gorodon'ny lalantsara. Tsy miandraikitra ny trano fipetrahan'ny vahiny izy. Tsy mandamina efitrano. Inona no tsy rariny? Nandany teo amin'ny BD1,500 (3980 USD) teo izy mba hahazoana fahazoandàlana hiasa ao Bahrain. Nomena roa taona izy. Mandray BD10 (26 USD) isanandro, izany hoe mahazo BD240 (636 USD) isambolana. Tsara karama ihany ve izany? Andraso..! Mila mandoa ny hofan'ny toerana ipetrahany, ny rano, ny herinaratra, ny sakafo ary mazava ho azy mandefa vola any an-tanàna.
Ndao hokajiantsika. Ho an'ny trano, mandany ataontsika hoe eo amin'ny BD50 (132 USD) isambolana eo izy amin'ilay trano ifampizaràny. Avy eo ny rano sy jiro mitentina BD10 (26 USD) fanampiny, ary avy eo ny sakafo BD40 (106 USD) isambolana. Aoka tsy ho adino, satria manana tompomenakely na olona mpandamina ny hananany asa izy, isan'izany ny fametrahana azy any amin'ny toerana isankarazany any, tsy maintsy mandoa, raha kely indrindra, BD25 (66 USD) ho an'io olona io izy. Araka izany, ny vola mivoaka ao an-tokantrano fotsiny dia efa mety hitentina BD115 (305 USD) isambolana. Ao anatin'ny taona iray (12 volana), afaka manangona BD1,380 (3660 USD) izy. Tsy mbola ampy io masom-bola io handoavana ny “visa” – fahazoandàlana na ny “saram-pidirana”, izay BD1,500 (3980 USD). Tsy ananako hevitra na ara-dalàna na tsia io tarehimarika io, saingy ny zavatra iray tena tsy takatro dia ao anatin'ny roa taona, BD1,260 (3340 USD) monja no tahiry afa-karatsaka voaangony. Fehiny, mandany 1,500 (3980 USD) izy ary manao sorona ny taona roa niasàny mafy mba hànanany BD1,260 (3340 USD) monja. Raha hanitatra ny fahazoandàlany hiasa mandritry ny roa taona fanampiny, tsy maintsy mampiasa BD1,000 (2652 USD) indray izy. Midika io fa ao anatin'ny roa taona, BD260 (690 USD) afa-karatsaka no hany mba voaangony ary mbola tsy haiko izay fomba andoavany ny tapakilam-piaramanidina. Tena tsy takatro mihitsy satria dia tsy rariny fotsiny izao!
Francine Burlett, Frantsay mpanoratra monina ao Bahrain, dia nitafa taminà ramatoa Indiana iray antsoina hoe Yasmina, teny ambony sidina avy ao Muscat ho any Bahrain tamin'ny May 2009 teo. Ity ny tantaran'i Yasmina :
Tsy mora, ny fiainako ao Chennai (India), azonao. Manana zanaka vavy roa mianatra amin'ny Kolejy aho. Indray andro any, ho dokotera izy ireo. Fa mialoha izany, tsy maintsy mandoa, mandoa ary mandoa hatrany. […] Fantatraooo, vao avy nandany volana roa tany Salalah, any Omàna aho. Najanoko ny asako tany omaly. Nipetraka taminà fianakaviana Omani iray aho. Niteraka folo ilay ramatoa – valo vavy ary roalahy – ary amin'ny faran'ny May dia hiteraka ny zaza faha-iraika ambinifolo izy. Azonao ve izany e? Zaza iraika ambinifolo… Mahafinaritra izany….Saingy tsy ho eo intsony aho hahita hoe lahy sa vavy ilay zaza. Tsy maintsy mandeha aho. Sarotra ny hamela irery azy, tsy misy mpanampy eo akaiky eo rehefa hiteraka an-janany, saingy tsy afaka mijanona aho.
Isankariva, mitady hiditra ao an'efitranoko ny vadiny. Isankariva aho niteny taminy fa, “Mpiasanao aho fa tsy vadinao. Ndeha miverina any am-pandrianao any. Tsy manana zo hanao izany amiko ianao. Avelao aho hiala sasatra. Reraka aho…” Mba azonao an-tsaina ve? Zaza folo, ny asa an-trano, ny fahandroana hanina, ny fanasàna dishdashas sy abayas aman-taonina isanandro, ny lambam-pandriana, ny taty vita lamba, ny lamba famaohana…Nefa fantatraoo, tsy raharahaiko izay asa, tsy mahay manao zavatra hafa aho. Feno fahavononana aho. Tsy atahorako izay asa mafy any. Fa rehefa alina, tsy ananany ny zo hanao izany amiko. Mikitikitika ahy, manorisory ahy. Tsy nahavita nanakana azy aho. Tsy nanana tanjaka loatra..Tsy maintsy nandray fanapahankevitra hanao zavatra aho. Haingana..
Hitanaooo, ireo mpiasa an-trano toa ahy avy any India, Sri Lanka, Somalia, Filipina, fahazoandàlana roa taona no azon'izy ireny, ary aorian'izay dia tsy afaka manafoana ny fifanarahana asa nataony ry zareo, hiverin-dàlana. Giazan'ireo mpampiasa anay ny pasipaoronay, ary rehefa tsy tiany handeha izahay, tsy misy na inona na inona azonay atao. Mila manaja ny fifanarahana asa roa taona nataonao ianao alohan'ny ahafahanao miverina mody. Izay no lalàna. Efa niteny tamin'izy ireo aho fa te-hiverina hody alohan'ny fahataperan'ilay fepotoana, zoko izany. Na teo aza izay, tsy nanaiky ny hanaovako izany ny vadiny.
Noho izany dia niditra taminà fitokonana tsy hisakafo aho. Nandritry ny andro dimy, tsy niala ny efitranoko aho. Tsy nihinana na nisotro, tsy nisasa. Niantso mpitsabo ry zareo, ary io no niantso ny polisy. Teo! Tonga dia naterin-dry zareo teny amin'ny seranam-piaramanidina aho. Ilay rangahy no tsy maintsy nanefa ny saran'ny tapakilan'ny fiaramanidina hodiako, ary namerina tamiko ny pasipaoroko, izay no lalàna. Saingy ratsy hatramin'ny farany ilay rangahy mandra-pahitako ny farany, azonaoo. Tsy haiko ny namaky. Tsy takatro izay voasoratra teo amin'ny tapakilam-piaramanidina. Fa rehefa hiakatra, vao niteny tamiko ny mpikarakara mpandeha tao amin'ny Gulf Air fa zotra ho an'ny Ramanathapuram io, fa tsy Chennai, tanàna niaviako. Mba afaka hino izany ve ianao? Nandà tsy nety niakatra aho. Handeha ho aiza? Ho any aminà tanàna tsy haiko akory, tsy misy vola, tsy misy na iza na iza, 600 km miala amin'ny misy ahy? Soa ihany, naloan'ny polisy ny tapakila avy any Ramanathapuram mankany Chennai. Tsy maintsy hamerina ny volan'izy ireo ilay rangahy. Tena nanao ny mety ry zareo, azonaoo. 60 Rials (155 USD) amboniny…karama iray volana ho ahy!
Efa nipetraka taona 5 tao Dubai, toerana nanaovako “tsambikina” (mitsambikina: mandao ny mpampiasa azy ka mamela ny pasipaorony any, ary mandeha miasa any an-toerana hafa be karama kokoa saingy amin'ny fomba tsy ara-dalàna). Fahiny, niasa taona roa tao Arabia Saodita aho, taona roa tao Omàna. Tsy miambakavaka aho miteny Arabo. Raha mila olona ianao, aza misalasala miantso ahy any Chennai. Ho avy aho. Tena tiako ianao. Saingy tsy izao dieny izao. Mbola mba te-hahita ireo zanako vavy aho aloha sady maka aina kely…”